Ukutshala ipulazi nokunakekelwa | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukutshala ipulazi nokunakekelwa
Izimfihlo zokutshala nokunakekela iplamu
Njenganoma imuphi umuthi wegadi, iplamu inesikhathi sayo kanye nezidingo zokutshala. Kubaluleke kakhulu ukuzicabangela, ngoba iphutha elincane lingakunciphisa kokubili isihlahla kanye nokuvuna okulinde isikhathi eside. Kulesi sihloko sichaza zonke izici nezinhlelo zokutshala iplamu, sikutshele ukuthi ungayikhetha kanjani indawo efanele futhi uyinakekele kulo lonke isikhathi sokukhula.
Ukukhulisa umgodi weplamu: isincomo segadi
Ngezinye izikhathi, ukudla isithelo esiphundu kakhulu, kunesifiso sokuzama ukuhluma ithambo ukuze uthole umuthi omuthi othela izithelo. Lezi zinkundla zivame ukuba nemibuzo mayelana nokuthi ungakhula iplamu yini noma yimuphi omunye umkhuba ovuthiwe kusuka etsheni lekhaya. Lokhu kungenziwa, kodwa kunzima kakhulu, ngoba ngaphambi kokutshala iplamu kusuka etsheni, kubalulekile ukulungiselela.
Kuyini iplamu yaseHungary nokuthi ungayikhula kanjani endaweni yami
Ephelele emhlabeni kunezinhlobo ezingaba ngu-30 ezinhlobonhlobo zezihlahla zeplamu. Iningi lazo lihlukaniswa emagatsheni abo - ama-subspecies akhalwa ngabalimi. Esikhathini samanje sizokhuluma ngalolu hlobo lwesiqu saseHungary. Izici kanye nezici zeplamu yeHungary Hungarian yiqembu elihlukahlukene lezinhlanzi zasendlini.
Izici zokukhula kwama-Chinese: ukutshala nokunakekelwa
Amapulaya aseShayina akavami ukutshala emasimini ethu, kodwa kukhona abathandekayo abazama ukuwuqeda. Emva kwakho konke, kuhlale kujabulisa izithelo ezinomsoco futhi ezihlwabusayo, kunikeza ukuqhakaza okuhle nokuqhakazayo, ukulimala kokuqala. Ngaphezu kwalokho, izinhlobo zalezi plums zivumelanisa kalula nanoma yiziphi izimo zezwe, ziqinile, zilwa nezifo nezinambuzane.
Izinhlobonhlobo ezidumile ze-plum yaseHungary
Plum IsiHungary yaba yintandokazi phakathi kwabalimi. Izinhlobonhlobo zifana nombala omnyama obomvu wezithelo, ekuthinteni okubhemayo, kanti ama-plums aseHungary afana neqanda elineqanda. Kuphela izinhlanzi zezinhlobo zesiHungary zenza umlimi, njengoba ziqukethe i-pectin eningi, ushukela nezinto ezimile. Ama-plums asetshenziselwa ukupheka futhi adliwe fresh.